Kardia Band, yekutanga tambo ine electrocardiogram muverengi weApple Watch | Ndinobva mac
El Apple Watch iri kuve shanduko nekuve chishandiso chekutarisa hutano hwedu. ari kupfeka Apple yatove mune yayo yechitatu vhezheni uye zvinoita sekunge zvinhu zviri kutaridzika zvakanaka. Zvakare, avo vari muCupertino vazviita zvakasununguka parunhare uye vakawedzera mukana wekubatana neLTE network - kuSpain vachiri kumirira chibvumirano.
Kune rimwe divi, AliveCor ikambani inozvipira kudzidza, kuverenga, uye kududzira zviratidzo zvemagetsi zvemwoyo. Mamwe makore apfuura, iyi kambani yakaunzwa munzanga Kardia Mobile, module inoiswa mu smartphone uye inokwanisa kuverenga masaini emoyo uye kuratidza maelectrocardiograms. Zvakawedzera, chishongedzo ichi chakabvumidzwa neDFA (iyo US hurumende agency inoona nezve chikafu nemishonga).
Iye zvino vaenda nhanho imwe kumberi, sezvavanotiratidza pane iHacks portal. Iye zvino kambani yave kuda kutora mukana weApple smart wachi uye kuvhura iyo Kardia Band, wekutanga EKG muverengi weApple Watch (electrocardiograms) zvakare inogamuchirwa neUS FDA.
Tambo iyi, iyo pakuonekwa yakafanana neyakajairika - inogara ichitaura nezve mamodheru akagadziridzwa kuApple Watch - asi ine maseru kumativi ese uye pamwe neapp yaunogona kurodha pasi kubva kuApp Store, wachi ichakwanisa kufungidzira matambudziko emoyo. Sekureva kweAliveCor pachayo, nekushandisa kworudzi urwu rwezvishandiso mushandisi anokwanisa kuwana chiyero chakawedzerwa neana mukutsvaga matambudziko eatriology.
Kune rimwe divi, AliveCor inoita electrocardiograms pazviitiko uye yawana rutsigiro rwevazhinji vevashandi kubva pasirese pasirese. Zvakare, iyi Kardia Band haina mutengo wakachipa: 199 madhora. Kunyangwe sezvavanotaura: usatambe nehutano hwako uye kana iwe uchikombamira kumarudzi aya ematambudziko, zvirinani kugadzirisa pane kurapa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kardia Band, yekutanga tambo ine electrocardiogram muverengi weApple Watch